Ndị na-emepụta nhicha ikuku - China Purlọ nhicha ikuku na ndị na - eweta ya
Ọmarịcha Ọdịmma Ikuku Ime ụlọ, Ọdịnaya Oxygen Dị Elu Thedị sistemụ ikuku ikuku dị n'otu ụzọ na-enye ikuku dị n'èzí n'èzí ka ọ nwee ụlọ dị ọcha. Ọ kwadebere n'ụzọ abụọ nzacha na PM2.5 filtration ọnụego n'elu 95%. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ na Holtop ike mgbake ventilator maka ikuku dị ọcha karị ma ọ bụ jiri onwe ya mee ihe maka ikpocha ikuku na usoro ikuku ikuku. Ọ nwere nhọrọ nhọrọ nke nrugharị ime ụlọ. Na ọnọdụ mgbe ọ na-ekwesịghị ka ...
(5) qualitydị elu dị elu, nhazi ngwa ngwa na ndozi